Njengoko ndandijonga izimvo, ndandingaqinisekanga ukuba ndenzeni. Eyona nto bendifuna ukuyenza kukususa uluvo. Ungathini ukutsho lonto ngomhlobo wam? Kodwa ukucima amagqabantshintshi bekuya kwaphula ukuthembana endikwenzileyo kunye nabafundi bam. Kwaye ukuba wayenomsindo ngokwenene, ngewayethumele la magqabantshintshi kwenye indawo kumnatha.
Endaweni yoko, mna uthumele impendulo, engavumelani noko wayekubhalile, kwaye wanika umhlobo wam “iintloko”. Ucele abanye abantu ekuhlaleni ukuba bathumele izimvo. Emva koko wongeze impendulo yakhe, emkhuthaza umntu ongonwabanga ukuba aqhakamshelane naye ngqo, evuma ukuba inombolo yomnxeba kwishicilelo lokuqala ayilunganga.
Aug 28, 2009 ngo-4:53 PM
Ndiyibonile le nto ibisenzeka izolo kwaye iphinde yaqinisekisa inkolelo yam yokuba ukuba ungakhuthaza kwaye ukhulise uluntu oluthembekileyo, ulwazi olungeyonyani kunye nokunyathela ngokukhawuleza kucinywa ngamalungu ayo. Kwangaxeshanye amagqabaza angakhiyo asoloko eyinto embi njengoko esinika ithuba lokuphulaphula nokulungisa nantoni na esenokuba ayihambanga kakuhle.
Aug 28, 2009 ngo-5:22 PM